China HOT WORK STEEL fekitari uye vagadziri | Nhoroondo
TCT KODZIDZA CHEMA CHAKASIMBISA MATERIAL
KUDZIVA STEEL HOLLOW BAR 1.2344-H13
Hot Basa Chishandiso Simbi, sezita ravo rinoreva, anoshandiswa panoshanda tembiricha yechishandiso inogona kusvika pamatanho uko kuramba kupfavisa, kupisa kupisa uye kukatyamadza kwakakosha, Iyo ine yakanyanya kupisa kupisa uye yepakati kusakara kuramba, Kukanganisa mukuomesa kunononoka
Kupisa Kwebasa Chishandiso Simbi Yakagadzirwa Round bar
Hot Rinoshanda Turu Simbi yakakungurutswa Flat bhaa
Hot Rinoshanda Chishandiswa Simbi Mhango Mabhawa
Kupisa Kwebasa Chishandiso Simbi Yakakungurwa Kufa
Hot Rinoshanda Turu Simbi vane zvinotevera zvivakwa:
Kuramba kune kupisa kwekupisa
Yakakwirira - tembiricha simba
Yakakwirira -temperature kuomarara
Yakakwirira -tembiricha inopfeka kuramba
Yakakwira -tembiricha ngura kuramba
Hot Basa Chishandiso Simbi, sezita ravo rinoreva, anoshandiswa panoshanda tembiricha yechishandiso inogona kusvika pamatanho uko kuramba kupfavisa, kutarisa kupisa uye kuvhunduka kwakakosha, Ine kupisa kwakanyanya kupisa uye kwepakati kupfeka kuramba, Kukanganisa mukuomesa kunononoka.
Iri boka resimbi rakanakira kushandiswa kwakadai sekufa-kukanda kufa, extrusion inofa, Mapurasitiki ekuumba Anofa, Kupisa kwekuchengetedza Dies, Hot gripper uye kunongedza MaDies, anopisa mandrels, anopisa basa zvibhakera uye anopisa sheari mapanga
Kunyanya HOT BASA BHUKU Giredhi Nha. Isu Takapihwa:
Kukwirira kuomarara, kwakanakisa kupfeka kuramba uye kuomarara kunopisa. ine yakanaka yekupisa yekuvhunduka kuramba, (ESR) H13 ine homogeneity yakakura uye chimiro chakasarudzika, zvichikonzera kuvandudzwa kwemachinability, polishability uye yakasimba tembiricha tensile simba.
Pressure vanofa vachikanda maturusi, extrusion kufa, yekuchengetedza kufa, kupisa shear mashizha, kutsika kufa, mapurasitiki mafuru, Hot basa mandrels, ESR H13 yakanaka kune aruminiyamu kufa-kukanda maturusi uye epurasitiki muforoma maturusi anoda akakwirira kwazvo polish.
Kwakanaka kukanganisa kusimba. Iyo tungsten yezvinyorwa inopa zvirinani kutsamwa kusagadzikana, kudzika-kuomesa, mweya-kuomesa simbi iyo inoratidza mashoma kushoma saizi shanduko panguva yekupisa kurapwa. Kurwisa kwakanaka kune kunopisa kuneta kutsemuka
kupisa zvibhakera, kufa kufa uchikanda kufa, kwekuchengetedza kufa, kupisa shear mashizha, kupisa gripper kunofa, uye extrusion inofa.
Kukwirira kuomarara, kuomarara kwakanakisa, kushora kwakanaka kwekupisa kana mvura yatonhorera mukushandira, saizi yakakura shanduko panguva yekurapa kupisa.
Yakurudzirwa yekupisa ekushandisa ekushandisa uko kunonyanyisa kuramba kurwisa kunodiwa. Hot zvibhakera, kufa vachikanda anofa, nokuchengetedza anofa, inopisa shear mashizha, inopisa gripper anofa, extrusion anofa.
Kwakanakisa kuramba kupfavisa pakukwirisa tembiricha. inonyatsodzivirira pakupisa kwekuneta, uye inogona kutonhodza mvura mushando
Heavy simbi Die-vachikanda maturusi, Kuboora Mandrels, Hot zvibhakera, nokuchengetedza anofa, kupisa sheari mashizha
Anoratidza rakaisvonaka nemishonga softening panguva yakakwirira tembiricha. Haifanire kuve nemvura yakatonhodzwa mushando kunze kwekunge chishandiso ichi chinosanganisira kuyerera kwekuenderera kwemvura yemukati kutonhora. Thermal kuvhunduka kunofanira kudzivirirwa
Yakakurudzirwa kunonetsa kupisa basa tooling mafomu senge yendarira extrusion, ndarira kufa kukanda kufa, kupisa zvibhakera, kugadzira kufa kunoisa.
Yakakura yekukanganisa kuomarara uye yakanaka kuramba kupfavisa pane yakakwira tembiricha. kurwisa kwakanaka kune kupisa kwekupisa uye kupisa kwekuneta kutsemuka, diki diki diki shanduko panguva yekuomesa.
Die nokuchengetedza, kufa vachikanda, extrusion, girazi kugadzira,. Mandrels, Vanofa varidzi
Kunyanya Cold Basa Chishandiso Simbi Giredhi Nha. Isu takatipa:
KUSANGANISWA KWEMUSANGANO UYE ZVINHU ZVINOGONESESWA
Round Round BAR
PASI PASISINA CHINOGONESESA
Dhayamita IN MM
HOT inotenderera REMA
VAKANGANISWA RUDZIMA RWOSE VAKANYUNGUDZWA
NOKUDZU X UPamhi IN MM
350-800MM DIA X80-400 ZVAKAWANDA
Pashure: KUDZIVA STEEL HOLLOW BAR 1.2344-H13
Zvadaro: HSS CIRCULAR YAKAONA MABASA
Hot Anoshanda Simbi Mutengesi
Kupisa Kubasa Simbi Distributer
Hot Basa Simbi Inotengesa
Hot Basa Simbi Supply
Tct Denderedzwa Yakaona Nereza Yesimbi, Kupisa Kwekushandisa Chishandiso Simbi Yakakungurudzwa Flat Bar, Hss M35 Denderedzwa Yakaona Makasi, Tct Denderedzwa Yakaona Makasi, Tct Denderedzwa Yakaona Nereza, Hss M2 Denderedzwa Yakaona Makasi,